Food Wars! Shokugeki no Soma – MMANIME
5 Seasons 85 Episodes
Created byYūto Tsukuda
StarringAi Kayano, Asami Seto, Chinatsu Akasaki, Jun'ichi Yanagita, Junichi Suwabe, Kengo Kawanishi, Maaya Uchida, Minami Takahashi, Risa Taneda, Saori Oonishi, Taishi Murata, Takahiro Sakurai, Yoshitsugu Matsuoka, Yuki Ono
Synopsis of Food Wars! Shokugeki no Soma
Food Wars season
ဈေးကွက်ကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ချက်ပြုတ်ရေးကျောင်းဖြစ်နေတဲ့အပြင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အတွက် ကျောင်းပြီးအောင်မတက်နိုင်သူတွေ၊ကျောင်းကထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတဲ့ကျောင်းပါ။
ပြီးတော့အတော်တကာ့အတော်ဆုံးလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရွေးစင်ဆယ်ယောက်အဖွဲ့လည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အကြောင်းကိုသိသွားတဲ့ဆိုမာဟာ နံပါတ်တစ်နေရာကိုယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆိုမာဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ။အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
Episode runtime 24 minites
All episode 720p(lol anime myanmar)
All Episode 720p(Golden Anime)
Translated by Kan San
Yandex / Racaty / Gdrive / Usersdrive
Episode2[1080p]
Yandex / Racaty / Gdrive / Userdrive / Megaup
Episode2[720p]
Yandex / Racaty / Gdrive / Usersdrive / Megaup
Episode3[1080p]
Episode4[1080p]
Episode5[235MB – 1080p]
Mega.nz / Myandrive / Yandex / Usersdrive / Racaty / Mediafire / MMDrive
Episode6[247MB – 1080p]
Mega.nz / Yandex / Racaty / Myandrive / Usersdrive / Mediafire / MMDrive
Episode7[240MB -1080p]
Mega.nz / Yandex / Mediafire /Myandrive / Usersdrive
Episode 8 [254MB -1080p]
Mega.nz / Mediafire / Myandrive / Yandex
Episode9[230MB – 1080p]
Episode 10 [234MB – 1080p]
Episode 11 [264MB – 1080p]
Episode 12 [225MB – 1080p]
Mediafire / Mega.nz /Myandrive / Usersdrive
Episode 13 [225MB – 1080p]
Mediafire / Mega.nz / Myandrive / Usersdrive
Airs OnANIMAX, BS11, CBC, MBS, TBS, Tokyo MX, Toonami
Firt air date2015-04-04
Last air date2020-04-18
Home PageFood Wars! Shokugeki no Soma
[Hentai] Kakushi Dere